Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Oktobra 2019 à 09:19
Endrik'io pejy io tamin'ny 27 Jolay 2019 à 09:45 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 9 Oktobra 2019 à 09:19 (hanova) (esory)
== Famintinana ==
Tsy i Paoly no nanorina ny fiangonana tao Kolosia fa i Epafrasy izay nitory ny vaovao mahafaly tao (Kol. 1.7). Eny am-panombohana ny taratasiny i Paoly dia miarahaba ny mpamaky azy sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary mivavaka (Kol. 1.1-11). Soritsoritany mazava ny amin’i [[Jesosy|Kristy]] sy ny asa fanavotana nataony ka ilazany fa amin’ny firaisana amin’i Kristy ihany no misy ny fahasambarana fa tsy araka izay lazain’ireo mpampianatra mandainga (Kol. 1.12-23 ; 2.6-19). Lazalazain’i Paoly koa ny ady atrehiny hampandrosoana ny fitoriana ny vaovaoVaovao mahafalyMahafaly tamin’ireo Kristiana kolosiana sy laodikeana (Kol. 1.24 – 2.5).
Mampitandrina mialoha ny Kristiana ao [[Kolosia]] i Paoly mba tsy ho voataonan’ny fampianarana mifanohitra amin’ny fampianaran'i Kristy. Izany fampianarana tsy izy izany dia manankina ny famonjena amin’ny fahalalana, izay fantatra taty aoriana amin'ny anarana hoe [[gnostisisma]]. Ny Fiangonana dia vatan’i Kristy, hoy i Paoly (Kol. 1.15-20). Ampahatsiahivin’ny Paoly ny fototra iorenan’ny Vaovao Mahafaly na Filazantsara. Izany fampianara-diso izany dia ny fampianaran’ny [[Filôzôfia|filozofa]] (Kol. 2.8) izay mampifangaro finoana isan-karazany amin’ny [[fivavahana jiosy]] (toy ny fivavahana amin’ny [[anjely]] sy ny tsy maintsy hanatanterahana famoràna) izay miendrika fampijalian-tena hahazoana famonjena (Kol. 2.20-23).
Mananatra ny Kristiana mba tsy hino afa-tsy an'i Kristy voahombo tamin’ny hazofijaliana sy nitsangan-ko velona i Paoly. Ny finoana an’i Kristy, hoy i Paoly, no manafaka amin’ny fahendren’izao tontolo izao, izay tsy marina, sy amin’ny fitandremana ny [[Lalàn'i Mosesy|Lalàna]]. Manambara i Paoly fa ny fiainana kristiana dia fiainan’ny olona afaka (Kol. 2.20-3.5) sady anjakan’ny fitiavana sy ny fiadanana (Kol. 3.6-17) izay tsapa eo amin’ny fianan’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina (Kol. 3.18-4.6).
== Fizaràn'ny epistily ==
* Teny fiarahabana sy fisaorana ary vavaka (1.1-11)
* FiekenFiekem-pinoana amin'ny batisa (1.12-20)
* Asam-panavotana adraisan'ny fiangonana anjara (1.21-23)
* Asam-panavotana ampitain'ny Apostoly amin'ny alalan'ny asam-panompoany (1.24-29)
* Tokony hiorina mafy ny Kristiana (2.1-7)
* Tsy tokony ho azon'ny [[fampianaran-diso]] (2.8-17)
* Ny fandresen'i Kristy yny fahefana rehetra (2.18-23)
=== Anatranatra nataon'i Paoly ho an'ny Kristiana ao Kolosia ===
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/975502"